कहिले,किन र कसरी खाने दही ? खान नजान्दा बन्छ बिष ! | Rajmarga
कहिले,किन र कसरी खाने दही ? खान नजान्दा बन्छ बिष !
काठमाडौं -तपाईं सादा, ग्रीक, स्वादिष्ट वा ‘लो फ्याट’ जुनसुकै दही खान सक्नु हुन्छ । किनकि दही पोषणले भरिपूर्ण खानेकुरा हो। यसले तपाईंलाई पर्याप्त क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन बी, पोटासियम, फस्फोरस, म्याग्नेसियमजस्ता पोषण दिन्छ। लो फ्याट ८ औंस दहीले हामीलाई चार सय मिलिग्रामभन्दा बढी क्याल्सियम दिन्छ, जुन हामीलाई दैनिक चाहिने क्याल्सियम मात्राको आधा हो।
दूध ‘ल्याक्टोब्यासिलस बल्गारियस’ र ‘स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस’ ब्याक्टेरियाले फर्मेन्टेसन भएर दहीमा परिणत हुन्छ । ‘प्रोबायोटिक्स’ पनि भनिने स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक यी दुवै ब्याक्टेरियाले दहीलाई स्वादिलो बनाउनुका साथै लामो समयसम्म खान योग्य बनाउँछन्। प्रोबायोटिक्सले दूधमा भएको ‘सुगर ल्याक्टोज’ पचाउन सघाउँछ र दूध र दुग्धजन्य पदार्थ पचाउन नसक्नेलाई समेत दही सजिलै पचाउन सघाउँछ। दहीमा भएका प्रोबायोटिक्सले रोग प्रतिरोध क्षमतासमेत बढाउन मद्दत गर्ने अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्।
तपाईं दहीलाई अझै पोषणयुक्त बनाउन चाहनु हुन्छ भने ग्रिक दही खानुहोस्, जसमा सामान्य दहीमा भन्दा प्रोटिनको मात्रा दुई गुणा बढी हुन्छ। साथै, यो दही बन्ने प्रक्रियामा ‘ह्वे’ ९जसमा ल्याक्टोज, भिटामिन, प्रोटिन र खनिज हुन्छ० सँगै ‘सुगर’ पनि हटाइन्छ। त्यसैले सामान्य दहीमा भन्दा ग्रीक दहीमा सुगरको मात्रा थोरै हुन्छ। फ्याटले ऊर्जा क्यालोरी बढाउँछ। एक कप फ्याटरहित ग्रिक दहीले एक सय क्यालोरी ऊर्जा दिन्छ र शून्य फ्याट हुन्छ। ‘होल मिल्क’ जमाएर बनाएको दहीमा ७ ग्राम स्याचुरेटेड फ्याट र १ सय ९० ग्राम क्यालोरी ऊर्जा हुन्छ।
दही राती सेवन गर्नु हुँदैन । किन त ?
यसका केही कारण छन्,
छालाको सुन्दरताका लागि दही साह्रै उपयोगी
– अनुहारमा नियमित रुपमा दही लगाउनाले अनुहारमा चमक आउँछ ।
– दहीले अनुहारमा भएका दाग तथा झुसिलोपनबाट बचाउँछ ।
– रुखो छालालाई नरम बनाउने काम पनि दहीले गर्छ ।
– कस्मेटिक सौन्दर्यभन्दा दहीको प्रयोग राम्रो मानिन्छ ।
– दहीले छालामा मोस्चराइजको काम गर्छ ।
– दहीमा पाइने लक्टिक एसिडले छालालाई फेसियल मास्कले जस्तै सुरक्षित राख्छ । साथै, छालाको भित्री भागमा रहेको फोहोरलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
– दहीमा गाजर, काँक्रो र मेवा लगायतका मौसमी फलफूलको रस मिलाएर अनुहारमा लगाउनाले छालामा निखार ल्याउँछ । केही मौसमी तरकारीको रस दहीमा मिसाएर लगाउँदा पनि फाइदा हुन्छ ।
– दहीमा कागतीको रस मिलाएर लगाउनाले छालालाई ताजा र स्वच्छ बनाउँछ ।
– दही र बेसन मिलाएर अनुहारमा लगाउँदा चमकता आउँछ । साथै, दाग धब्बाबाट समेत राहत मिल्छ ।
– दहीले छाला मात्र होइन कपाललाई पनि पोषण दिन्छ ।
– आधा कप दहीमा एक चम्चा जैतुनको तेल र एक चम्चा कागतीको रस मिलाएर अनुहारमा लगाई मनतातो पानीले धुनाले अनुहार आकर्षक देखिन्छ ।
– अमिलो दहीले मालिस गर्नाले घाँटीको पछाडि हुने कालोपन हट्छ ।
– लामो समयसम्म बढ्दो उमेरको प्रभाव हटाउन पनि नियमित दहीको लेपले सहयोग गर्छ ।
– दहीको प्रयोगले नङ र कपाललाई पनि फाइदा गर्छ । हप्तामा दुई पटक कपालमा दही लगाउनाले कपाल सुन्दर देखिन्छ ।
–राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ भने दैनिक खानाका साथ एक कचौरा दही सेवन गरौं ।
–दहीको मोही वा लस्सी बनाएर पिउँदा पेटको गर्मी शान्त हुन्छ । पेटमा गडबडी हुँदा दहीमा विीरे नुन हालेर खाँदा पनि फाइदा हुन्छ ।
Previous post: कुखुराको गन्धले मच्छड यसरी भाग्दोरहेछ
Next post: श्रीमतीले धोका दिएको थाहा पाएपछि श्रीमानले गुप्ताङ्गमा यसरी खुर्सानी हाले…
यस्तो छ चिलाएको मेटाउने काइदाको उपाय
तपाई टेन्सनमा हुनुहुन्छ ? यी हुन् मुड फ्रेस गर्ने उपाय र खानेकुरा
यस्तो छ काँक्रोका १५ रोचक तथ्य र आश्चार्यजनक फाइदा